Madagasikara : Taorian’ireny raharahara fanaovana ampihy mamba ny tany lonaka ireny, dia efa tafaverina sahady ve ny Daewoo? · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara : Taorian'ireny raharahara fanaovana ampihy mamba ny tany lonaka ireny, dia efa tafaverina sahady ve ny Daewoo?	Voadika ny 16 Janoary 2012 10:33 GMT
Zarao: Ny namana mpiblaogy Sam Ganegie no manapariaka taratasy malalaka izay nosoratan'Atoa Mamy Rakotondrainibe hoan'Atoa Andry Rajoelina ary mangataka fangaharahana mikasika ny raharaha manodidina ny fiverenan'ny orinasa Daewoo Logistics anivon'ny tontolo ekônomika Malagasy [fr]. Manolotra fanampim-panazavana manodidina ny fiverenan'io raharaha Daewoo io [fr] i Mahefa Rakotomalala [gazety lexpressmada.com]. Ity orinasa Koreana tatsimo ity moa dia iaraha-mahalala tamin'ny saika nanaovany ampihy mamba tany lonaka be velarana izay isan'ireo raharaha nahararaka ny filoha Ravalomanana teo aloha. Mety tsy ho raharaha tokana anefa io fa ahiana ny fisian'ireo fifanarahana hafa mikasika fanaovana ampihy mamba tany any Madagasikara.
Afrika MaintyKorea AtsimoMadagasikara
FampandrosoanaFifandraisana iraisam-pirenenaFitantanam-pitondranaHafanàm-po an-tseraseraMediam-bahoakaTontolo_iainanaVaovao Mafana